Showing ९१-१०० of १७९ items.
धरान/भनिन्छ, ‘कसैको घर कस्तो छ भनेर अनुमान लगाउन चर्पी हेरे पुग्छ ।’ अहिले यही उक्तिसँग धरान उपमहानगरको डम्पिङ साइट मिल्दो छ । विगत ५ महिनादेखि कोशी राजमार्गको धरान–इटहरी सडक खण्डको सेउती आसपास कुइरीमण्डल हुन्छ । धेरैले जाडो महिनामा लाग्ने हुस्सु भन्ने ठान्छन् । तर यथार्थमा उक्त कुइरीमण्डल त्यही डम्पिङ साइटमा जलाइएको धुँवाको हो । धुँवाको कारण विगत ५ महिनादेखि बिहान र बेलुका हिडिनसक्नु हुन्छ । धुँवाले पर्यावरणीय समस्या निम्तिने खतरा उस्तै छ । तर, पनि सम्बन्धित निकाय धरान उपमहानगरले नियन्त्रणका लागि हालसम्म पहल गरेको छैन । धुँवाका कारण स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुगिरहेको बीपी को
प्रकाशित मितिः मंसिर २०, २०७५
‘राज्यले नै समान नागरिकको व्यवहार गर्दैन’
दमक / उमेरले २ कोरी ५ पुगिसकेका मित्रलाल लकान्द्रीको जन्मजातै खुट्टा अपाङ्ग भएर जन्मियो । उनको दाहिने खुट्टा छोटो छ । पिँडुला लुला छन् । पैताला पनि पछाडि फर्किएको हातको हत्केला जस्तै छ । तर देब्रे खुट्टा चाहिँ तन्दुरुस्त छ । उनी बिना बैशाखी पनि त्यतिकै हिँड्न सक्छन् । उनी हेर्दा कमजोर जस्तो देखिने दाहिने खुट्टा खोच्याउँदै हिँड्न सक्छन् । यसरी नै हिँडेर उनले २५ वर्ष त पार पनि गरे । तर, विगत २० वर्षदेखि उनले कृत्रिम (प्लाष्टिकको) खुट्टा लगाएका छन् । तर हिँड्दा साङ्गको जस्तो सहज चाहिँ नहुने उनी बताउँछन् । ‘हिँड्दा त खुट्टा खोचिन्छ नै तर कहीँ कतै बस्दा झट्ट देख्नेले अपाङ्ग भनी नहाल्ने उनी ब
प्रकाशित मितिः मंसिर १९, २०७५
खेतमै अध्ययन, खेतमै गृहकार्य
दमक/सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ किशानलाई खेतमै अध्ययन, खेतमै गृहकार्य भन्दा । तर, झापा कमल गाउँपालिकाका किशानलाई खेतमै अध्ययन र गृहकार्य गराउन शुरू गरिएको छ । झापाको कमल गाउपालिकाको मूल कृषक समूह अन्तर्गत वडा नम्बर–६ स्थित हरियाली कृषक समूहका किशानले गृहकार्य गरेबापत बीउ पाउने गरेका छन् । कृषक मदनकुमार बोहोराले गृहकार्यका लागि एक किलो घाँसको बीउ पाएका छन् । बोहोराले मूल कृषक समूहमार्फत् १८ हप्ताको कृषि पाठशाला अध्ययनपछि गृहकार्यवापत एक किलो भेच जातको घाँसको बीउ पाएका हुन् । उनले दिनभरी कृषि पाठशालामा सिकेको ज्ञानलाई खेतमा प्रयोगात्मकका लागि दिइएको हो । बोहोरा जस्तै यो पाठशालामा अध्ययन गरि
५२२ पटक पढिएको
गोली लागेर प्रहरी जवान घाइतेः उपचारका लागि काठमाडौं लगियो
विराटनगर / फायरिङका क्रममा गोली लागेर पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र विराटनगरमा कार्यरत प्रहरी जवान राजेन्द्र यादव घाइते भएका छन् । प्रशिक्षार्थी प्रहरीलाई तालिम दिने क्रममा मंगलबार दिउँसो गोली लागेर सिरहा घर भएका २७ वर्षीय यादव घाइते भएको प्रहरी तालिम केन्द्रका प्रमुख एसएसपी शहकुलबहादुर थापाले जानकारी दिए । यादवको देव्रे हातको हत्केला पार गरेर गोली बाहिर निस्किएको छ । उनी प्रहरी तालिम केन्द्रमा प्रशिक्षार्थी प्रहरीलाई तालिम दिने प्रशिक्षक हुन । प्रशिक्षार्थी प्रहरीहरुलाई फायरिङ गराउने क्रममा दिउँसो २ बजे घटना भएको हो । नयाँ प्रशिक्षार्थीहरुलाई गोली हान्न सिकाउने क्रममा पेस्तोलमै गोली अड
प्रकाशित मितिः मंसिर १८, २०७५
१,३८७ पटक पढिएको
‘उद्देश्य पर्यटन प्रवद्र्धन नै हो’
उदयपुरको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा पर्ने बेलका नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ मैनामैनी क्षेत्रमा पहिलो पटक महोत्सव लगाउने तयारी भइरहेको छ । त्यहाँका धार्मिक तथा जैविक पर्यटकीय क्षेत्रहरूको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ पौष १ गतेदेखि ७ गतेसम्म महोत्सव लगाउने तयारीमा ७ नम्बर वडा समिति जुटेको छ । यही सेरोफेरोमा वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष तथा कार्यक्रम संयोजक सुरेन्द्र राईसँग ब्लाष्टकर्मीले गरेकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंश ः पहिलो पटक महोत्सव गर्न लाग्नुभएको छ किन गर्न लाग्नु भएको हो ? महोत्सव गर्नको उद्देश्य चाहिँ पर्यटन क्षेत्रहरूको प्रमोटका लागि नै हो । त्यहाँको धार्मिक स्थल मैनामैनी मन्दिर,
९९२ पटक पढिएको
बाह्र स्वर्णसहित डिपो च्याम्पियन
विजयपुर/दोस्रो मेयर कप स्कुल ओलम्पिकमा डिपो स्कुलले बर्चश्व कायम गरेको छ । डिपोले १२ स्वर्ण पदकसहित ६ रजत, ९ कास्य जित्दै गत वर्षको शाखलाई कायमै राखेको छ । डिपो गतवर्षको पनि सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता हो । च्याम्पियन बनेको डिपोले नगद १ लाख २० हजार रूपैयाँसहित ट्रफी प्राप्त गरेको छ । मङ्सिर ५ गतेदेखि जारी प्रतियोगिताको समापनका अवसरमा सोमबार डिपोलाई च्याम्पियनको ट्रफी र नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । ओलम्पिकमा सैनिक आवासीय मावि ११ स्वर्ण, २ रजत र १४ कास्य पदकसहित दोस्रो बनेको छ । सुनाखरी बार्डिङ स्कुलले १० स्वर्ण, ७ रजत र ९ कास्य पदकसहित तेस्रो बनेको छ । दोस्रो बनेको सैनिकले नगद ८० हजार
५८४ पटक पढिएको
भोको पेटमा शिक्षा कसरी अडिन्छ ?
रङ्गेली/ भोको पेटलाई खानेकुरा चाहिन्छ त्यसको अरु विकल्प छैन । साना बालबालिका त्यसै चञ्चलले स्वभाव हुन्छ । भोको पेटमा खेल्न पाए एकछिन अल्मलिएलान् । तर, भोको पेटले पढ्न सक्दैनन् । जति नै फकाए पनि खाली पेटमा शिक्षा निरर्थक हो । विराटनगर महानगरपालिकाको एक प्राथमिक विद्यालयमा यस्तै भोका बालबालीका पढन आउछन् । ‘टिफिन’ सम्म पनि शिक्षकहरुले अलमल्याएर राख्न सक्दैन् ।‘१२ नबज्दै पिर्लीक(पिर्लीक आँसुका डल्ला झादै भोकलागो भन्दै रुन्छन् ।’ शिक्षिका सिता दाहालले भनिन् ‘मनले मान्दैन खाएर आओ भन्छौ तर फर्केर आउदैनन्, खोज्न जानु पर्छ ।’ विराटनगर-१ श्रीनगर टोलमा परोपकार घा
९५१ पटक पढिएको
१,०७३ पटक पढिएको
कुहिएको अवस्थामा बखतबहादुरकाे शव फेला, अनुसन्धानमा जुट्यो प्रहरी
धरान । धरान–१७ को उदय सामुदायिक वन भित्र कुहिएको अवस्थामा अाइतबार एक मानिसको शव फेला परेको छ । धरान–५ बगरकाेटकाे सेउतीपुल नजिकैका बखतबहादुर रामदामको कुहिएको अवस्थामा शव फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डिएसपी सुमन तिम्सिनाले जानकारी दिए । उनको शव करिव २ महिनादेखि उक्त स्थानमा रहेको हुन सक्ने उनले अनुमान लगाए । घास दाउरामा गएका मानिसले कुहिएको अवस्थामा शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । उनी लामो समयदेखि हराइरहेको स्थानीयले बताएका छन् । रामदामको हत्या भएको हुनसक्ने स्थानीयले बताएका छन् । किनकी उनको जग्गा राखेर एक व्यक्तिले सुन पसल सञ्चालनमा ल्याएका थिए । उक्त सुन पसलका सञ्
१,२८८ पटक पढिएको
धरान उपमहानगरमा प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा ठेक्कापट्टा चौपट
जिरोपोइन्ट (ब्लाष्ट) असोज १२ गतेदेखि धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशसकीय अधिकृत नहुदा लेखाको सम्पुर्ण काम रोकिएको छ । आर्थिक क्षेत्रको महत्वपुर्ण सिफारीस पनि रोकिएको सेवाग्राहीले बताएका छन् । प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा नगरले गर्ने दैनिक कामकाज र आर्थिक कामकाजमा समेत समस्या देखिएको छ । प्रसासकीय अधिकृत नहुँदा निमित्त कार्यकारीलाई आर्थिक कारोबारको अधिकार नभएकोले अहिले नगरमा हुने कुनैप नि प्रकारको आर्थिक कारोबार नभएको वरिष्ठ लेखा अधिकृत भेषराज अधिकारीले बताए । नगरमा हुने जुनसुकै आर्थिक कारोबारका लागि अनिवार्य रूपमा प्रसासकीय अधिकृतको हस्ताक्षर आवश्यक भएकोले कुनै पनि आयोजनाका लागि आर्थिक कारोबार नभ